‘धुर्मुश’को नक्कली फेसबुक बनाएर रँगशालाको नाममा लाखौं ठगीको पर्दाफास ! धुर्मुशले कडा चेतावनी दिए (भिडियो हेर्नुस) – सुदूरखबर डटकम
यतिबेला चितवनमा बन्दै गरेको गौतम बुद्ध अन्तराष्ट्रिय क्रिकेट रँगशालामा बिभिन्न दृश्यहरु देख्न पाईन्छन् । धुर्मुश सुन्तली फाउण्डेसनको सँयोजनमा जनस्तरबाट बन्दै गरेको रँगशालामा एकातिर धमाधम रँगशाला निर्माणको काम भैरहेको छ भने अर्को तिर दिनहुँ सहयोगीहरुको सँख्या पनि उत्तिकै बढ्दैछ । कोही सामुहिक रुपमा त कोहि एकल रुपमा देशका बिभिन्न ठाउँहरुबाट रँगशालामा आई प्रत्यक्ष धुर्मुशलाई नै भेटेर सहयोग बुझाईरहेका छन् ।
अभ्यासका लागि बनेको ठुलो क्रिकेट मैदानमा दिनहुँ खेल खेल्दै क्रिकेट प्रेमीहरुले सहयोग दिने क्रम पनि बढ्दो छ । अर्को तर्फ रँगशाला भ्रमणकै लागि मात्र आउने र रँगशाला अघिको सुन्तला र बदाम खाँदै भ्यु टावरबाट पुरा रँगशालाको दृश्यहरु नियाल्नेहरुको सँख्या पनि उत्तिकै छ । यसै क्रममा रँगशालाका नाममा फेसबुकबाटै ठगी धन्दा सुरु भएको सुईको कलाकार सिताराम कट्टेल धुर्मुशले पाएका छन् । उनको फेब आईडी बनाएर यस्तो गरिरहेको खुलाशा भएको छ । ‘धुर्मुश’को नक्कली फेसबुक बनाएर रँगशालाको नाममा लाखौं ठग्नेको पर्दाफास ! धुर्मुशले कडा चेतावनी दिए (भिडियो हेर्नुस)